တကယ်ပဲ မိမိမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိသလား? – BurmeseHearts
တကယ်ပဲ မိမိမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိသလား?
ရာသီပေါ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်းဆီးစစ်ကိရိယာဖြင့် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးဟူသည့်အဖြေ(Negative) ရလင့်ကစား မိမိသွေးမှတဆင့် စစ်ဆေးပါက ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟူသည့်အဖြေ (Positive)ပေါ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များက ကိုယ်ဝန်ရှိ ၊ မရှိ သေချာစေရန် သွေးအဖြေ (hCG blood test))ဖြင့်လည်း စစ်ဆေးတတ်သည်။
ကလေးမွေးဖွားမည့် ခန့်မှန်းရက် (estimated due date)ကို ဘယ်လိုတွက်ပြီး သိနိုင်မလဲ?
သားအိမ်ခြစ်ထားတဲ့သူနဲ့ သားပျက်တဲ့သူတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းလက္ခဏာပေါ်တတ်သလား?
BurmeseHearts	 Jan 12, 2016 0
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများရဲ့ မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းကို …
ကလေးမလှုပ်ဘူးလို့ သံသယရှိရင် ကလေးလှုပ်ရှားမှုရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လို…